Global Voices teny Malagasy » Servisy Rosiana An-Tserasera Mangataka Amin’ny Vehivavy Handoa Fampahatsiarovana Ny Sipany Hividy Voninkazo Ho Azy Ireo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Avrily 2016 4:25 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Akon'ny RuNet
Noarahabaina tamin'ity fanontaniana manao hoe manaraka ity “Efa ela ve ny sipanao no nanome voninkazo anao?” ny mpitsidika ny servisy vaovao ao Rosia “Mila voninkazo aho ”. Manome toky avy eo ny tranonkala fa afa-manampy izy. Mialoha ny fanazavana ny hanaovana izany, dia lazainy ny fanazavana efatra mahatonga ny sipany tsy manao fanomezana voninkazo amin'ny vehivavy tiany: sahirana dia sahirana izy, tsy mieritreritra izy fa misy dikany be amin'ny vehivavy izany, mieritreritra izy fa fandaniam-bola izany voninkazo izany, na mieritreritra izy fa amin'ny andro fety ihany no ilaina izany voninkazo izany.
Araka ny haba-tranonkalam-baovao TJournal , tamin'ny faramparan'ny volana janoary no nisokatra ny servisy. Ny sampan-draharaha mpanao dokambarotra AddZIP, izay miorina ao St. Petersburg sy Veliky Novgorod no mitantana azy. Nolazain'ny sampandraharaha tamin'ny TJournal fa tetikasa ara-barotra feno ny tranonkala ary efa manana volamaty. Nilaza ny AddZIP fa efa eo am-pikarakarana raharaha mitovy amin'izany ihany koa, natao na ho an'ny sakaiza lahy na ho an'ny sakaiza vavy, nokendrena hampahatsiahy hanao zavatra isan-karazany amin'ny ankilany. (Tsy hita kosa ny resaka hiantsoana ho an'ireo mpifankatia lahy tia lahy na vavy tia vavy.)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/06/80391/
 Mila voninkazo aho: http://xn--b1aai8acxeoli.xn--p1ai/